Bursalı Durmazlar Romanya İçin Tramvay Üretecek | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[10 / 11 / 2019] ကမ္ဘာ့မီးရထားလမ်းအရှည်	91 အိန္ဒိယ
[10 / 11 / 2019] Trakya မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းနှင့်မြေပုံ	22 Edirne
[10 / 11 / 2019] Haliçမက်ထရိုတံတားကုန်ကျစရိတ်၊ အရှည်နှင့်ပုံစံ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[10 / 11 / 2019] Intercity မြန်နှုန်းမြင့် Express Flights စတင်ပါ	06 တူရကီ
[10 / 11 / 2019] 2020 သည် Bursa တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြီးဆုံးမည့်နှစ်ဖြစ်သည်	16 Bursa
[10 / 11 / 2019] 10 နိုဝင်ဘာပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အခမဲ့လား။	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[09 / 11 / 2019] Marmaray လက်မှတ်စျေးနှုန်းနှင့် Marmaray လေ့လာရေးခရီးအချိန်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[09 / 11 / 2019] Lakes Express လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ	32 Isparta
[09 / 11 / 2019] Adana Metro မြေပုံလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနှင့်လမ်းကြောင်းများ	01 Adana
[09 / 11 / 2019] EGO ဘတ်စ်ကားစီးယာဉ်တွင်တက်ကြွသောယာဉ်အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။	06 တူရကီ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBursalı Durmazlar ရိုမေးနီးယားများအတွက်ရထားတည်ဆောက်ရန်
Bursalı Durmazlar ရိုမေးနီးယားများအတွက်ရထားတည်ဆောက်ရန်
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
Bursa, တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးလမ်းရထားထုတ်လုပ်သူများထဲမှ Durmazlarရိုမေးနီးယားတွင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အစိမ်းရောင်အလင်းပေးခဲ့သည်။ Durmazlarရိုမေးနီးယားတွင်အနိုင်ရမည့်တင်ဒါများအရရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်မည် Durmazlar Raylı Sistemler Genel Müdürü Abdullah Bocan, Romanya’da üretim yapma konusunda ihalelere göre hareket edeceklerini dile getirdi.
တင်ဒါစျေးနှုန်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.2 ဘီလီယံဖြစ်သည်
Geçtiğimiz aylarda Romanya’nın başkenti Bükreş’te belediyenin düzenlediği ihaleyi 100 tramvay alımı ihalesi açıldı. Durmazlar, bu ihaleye teklif veren firmalardan. Sözleşmenin yaklaşık 180 milyon euro yani 1.2 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. İhaleye Romanya ve Çinli şirketlerin kurduğu Astra Vagoane Calatori-CRRC konsorsiyumu da teklif verdi. Durmazlar Bükreş dışında Timisoara, Braila, Craiova ve Lasi kentlerindeki tramvay ihalelerine de katılmayı hedefliyor.
Türkiye’de Kocaeli ve Samsun’daki tramvay hatlarında çalışan Panorama model tramvayı üreten Durmazlar, Türkiye’nin ilk yerli tramvayını Polonya’ya ihraç etme kararı almıştı. Panorama, 2020 yılından itibaren Olsztyn kenti raylarında sefere başlayacak. Geçen yıl şubat ayında Polonya’nın Olsztyn kentinde gerçekleştirilen ihaleyi, en iyi teklifi sunan Durmazlar kazanmış, ilk etapta 12 tramvay üretimini kapsayan anlaşmanın ilerleyen dönemde büyüyerek, 24 adede çıkması planlanmıştı. 12 araçlık tramvayın bedeli ise yaklaşık 20 milyon euro civarında. Durmazlar Holding, 120 ülkeye ihracat yapıyor.
Kocaeli Sekapark - 12 လမ်းရထားယာဉ်များကိုဝယ်ယူရန် Otogar Tram Line စီမံကိန်းတင်ဒါ Durmazlar ဝမ် 03 / 09 / 2015 Kocaeli Sekapark - 12 လမ်းရထားယာဉ်များကိုဝယ်ယူရန် Otogar Tram Line စီမံကိန်းတင်ဒါ Durmazlar Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်ရထားလမ်းဌာနခွဲညွှန်ကြားမှု၏ 21 ဇူလိုင်လ 2015 နေ့လေလံများကိုစုဆောင်းခဲ့သည်၊ “ Sekapark - …
Bozankaya33 Million Euro ရထားလမ်းရိုမေးနီးယားသို့တင်ပို့ 30 / 07 / 2019 Bozankaya နှင့်Timişoaraမြူနီစီပယ် 16 အနိမ့်ကြမ်းခင်းလမ်းရထားများတင်ပို့ခြင်းအတွက် 33 ယူရိုသန်းစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကန ဦး ပေးပို့မှုကို 18 လများအတွင်းစတင်မည်ဖြစ်ပြီးစာချုပ်သက်တမ်းသည် 48 လများအတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်။ Bozankaya'nın…
Bozankaya33 Million Eurolines များကိုရိုမေးနီးယားမှရိုမေးနီးယားသို့တင်ပို့သည် 29 / 07 / 2019 တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်တင်ပို့ Bozankaya, Romanya’nın Temeşvar şehri için 16 adet %100 alçak tabanlı tramvay üretecek. 24 adetlik ek opsiyon ile siparişin 40 adete tamamlanması bekleniyor. Ankara’da elektrikli…
(အထူးသတင်း) Durmazlar Silkworm Tool သည် Innotrans ရှိလမ်းရထားများကြားတွင်ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာခဲ့သည် 19 / 09 / 2012 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားစနစ်များနှင့်ယာဉ်နည်းပညာပြပွဲ InnoTrans 2012, 18.09.2012 - 21.09.2012 ဘာလင်, ဂျာမနီ၌ပြစ်မှားမိကြားမှာ။ Durmazlar စက် InnoTrans သည် 2012 တရားမျှတသော Hall 2.2 / 104 ပြခန်းတွင်ပြသရန်အတွက်စောင့်နေသည်။
Izmir ၏ပထမဆုံးလမ်းရထားထုတ်လုပ်သူ Durmazlar စက်ယန္တရား 07 / 04 / 2014 Izmir ၏ပထမဆုံးလမ်းရထားထုတ်လုပ်သူ Durmazlar စက်ပစ္စည်းများ - İzmir Metropolitan Municipality, 12.6 ကီလိုမီတာÜçkuyular-Halkapınarနှင့် 9.7 ကီလိုမီတာ Alaybey-Mavişehirရထားလိုင်းများတင်ဒါတင်ဒါပြီးပါပြီ တင်ဒါ၏လှည်းGülermakအနိုင်ရ Durmazlar စက် ...
Lakes Express လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
Adana Metro မြေပုံလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနှင့်လမ်းကြောင်းများ
သမ္မတAktaş Kahraman ကကားမောင်းသူ Nuri Acar ကိုချီးမြှင့်သည်
Adana ပိတ်ခြင်း၏ Ceyhan ခရိုင်အတွင်းရှိဂိတ်
Samsun ရှိနောက်ဆုံးအစိမ်းရောင် Flash application
Nostalgic Tram Mersin မှလာ
mirzmir ရှိရထားဖြင့်ခရီးသည်များသည် 50 Million သို့ရောက်သည်
Kocaeli Sekapark - 12 လမ်းရထားယာဉ်များကိုဝယ်ယူရန် Otogar Tram Line စီမံကိန်းတင်ဒါ Durmazlar ဝမ်
Bozankaya33 Million Euro ရထားလမ်းရိုမေးနီးယားသို့တင်ပို့
Bozankaya33 Million Eurolines များကိုရိုမေးနီးယားမှရိုမေးနီးယားသို့တင်ပို့သည်
(အထူးသတင်း) Durmazlar Silkworm Tool သည် Innotrans ရှိလမ်းရထားများကြားတွင်ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာခဲ့သည်
Izmir ၏ပထမဆုံးလမ်းရထားထုတ်လုပ်သူ Durmazlar စက်ယန္တရား
60 ရထားလမ်းနှင့် 12 ရထားယာဉ်များအတွက် Bursa တင်ဒါ Durmazlar ဝမ်
Durmazlar စက်သည် HRS မော်တော်ယာဉ်များနှင့်လမ်းရထားများပို့ခြင်းအတွက် protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ် 60 မီးရထားလမ်းနှင့် 12 ရထားယာဉ်များအတွက်တင်ဒါရရှိခဲ့သည် Durmazlar ကုမ္ပဏီနှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
Durmazlarလင်းပိုင်ထုတ်ကုန်များသည် Kocaeli နှင့် Samsun တို့အတွက်ပြုံးရယ်ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (207) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
İzmir Metro မြေပုံ
Ankaray Metro မြေပုံနှင့် Ankara မီးရထားစနစ်
EGO အထွေထွေမန်နေဂျာAlkaşသည် Psycho-Technical Center သို့သွားရောက်လည်ပတ်သည်
မျိုးချစ်အသစ်များသည် ESTRAM တွင်စတင်လေ့ကျင့်သည်